PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-10-28 - BAFUNA INCAZELO KWI-SABC NGONGIZWE
BAFUNA INCAZELO KWI-SABC NGONGIZWE
Ilanga langeSonto - 2018-10-28 - Izindaba - JOHN HLONGWA
YIZINKUMBI zabantu okulindeleke zibe yingxenye yemashi ehlelwayo yokuhambisa izikhalo okhozini FM, mayelana nokuxoshwa kukangizwe Mchunu ( osesithombeni) ngeledlule.
Baningi abalaleli bokhozi abangabalandeli bakangizwe esebezwakalise ukungenami kwabo ngokuxoshwa kwakhe.
Abangenelisekile bakhala ngokuthi ISABC ayiphumeli obala uma ithatha izinqumo ezinqala abathi ziyabathinta nabo njengabalaleli.
Bathi ISABC ikucacisa kahle ukuthi yona isakazela umphakathi kodwa uma isithatha izinqumo ezithinta abalaleli iyabaziba, ibavalele ngaphandle, ingabachazeli ngokwenzekayo.
Okunye abakhala ngako ukuthi uma ISABC kumele iphendule ngokuthile okusuke kuthinta le nhlangano ivele ithi kuphakathi kwayo nesisebenzi bese bona njengabalaleli besala bengenalwazi olwanele ngokuthi kwenzekeni ngomsakazi wabo othile.
ILANGA Langesonto likhulume nomunye wabahleli bale mashi ubhekizitha “Mfolomane” Mayisa wasempangeni, Obuka, ongusihlalo womhlathuze Ngoba Makhosi othe: “Sihambisa ESABC izikhalo zethu ngokuxoshwa kukangizwe. Sizophinde sifune nemininingwane ngokuxoshwa kwakhe ngoba sithola ingacacile kahle.
“Silindele abantu abaphakathi kuka4000 kuya ku-5000,” kusho yena.
Uvusi Tembe, wenkampani yabameli ingwanase-tembe Inc., emele ungizwe kulolu daba, uthe akanalo ulwazi ngemashi ehleliwe kodwa angakusho ukuthi ukwesekwa kukangizwe kwenyuke kakhulu. Mayelana nezinhlelo zokumangalela ISABC, akathandanga ukwenaba njengoba ethe ngolwesihlanu bebethumele usherrif ukuba ahambise incwadi yesimangalo ESABC. Kubikwa ukuthi udaba luzongena enkantolo enkulu ethekwini mhla ka-22 kunhlolanja (February). Unkz Neo Momodu, okhulumela ISABC, uthe ngenxa yokuthi inkontileka yomsebenzi iyimfihlo ephakathi komqashi nesisebenzi, ngeke bakwazi ukudingida izizathu eziholele ekunqanyulweni kwenkontileka kangizwe. Uthe futhi bebengakaze baziswe ngezinhloso zokuhambisa uhlu lwezikhalo okhozini FM. hlongwaj@ilanganews.co.za